Halyayga Jamie Carragher oo sharaxay dhibaatada ugu weyn ee xili ciyaareedkan heysata kooxda Liverpool – Gool FM
Halyayga Jamie Carragher oo sharaxay dhibaatada ugu weyn ee xili ciyaareedkan heysata kooxda Liverpool
(Liverpool) 17 Okt 2018. Halyayga kooxda Liverpool iyo xulka qaranka England Jamie Carragher ayaa si cad u sheegay in wali aanan la buuxinin booskii uu kaga baxay Reds laacibkoodii hore reer Brazil Philippe Coutinho.
Jamie Carragher ayaa intaas kadib ku tilmaamay in mushkilada ugu weyn ee heysata kooxda Liverpool xili ciyaareedkan ay tahay in aan wali la buuxin booskii uu ka baxay Coutinho.
Tababare Jürgen Klopp iyo kooxdiisa Liverpool ayaan wax guul ah soo gaaray 4-tii kulan ugu dambeesay ay kasoo ciyaareen xili ciyaareedkan 2018/2019.
“Dhibaatada xili ciyaareedkan heysata kooxda Liverpool way iska cadahay, taas oo ah raadinta xalka, booskii uu ka baxay Philippe Coutinho bishii January ee lasoo dhaafay”.
“Feker ahaanteyda, maamulka kooxda Liverpool waxay ku qaldameen in si deg deg ah aysan u sameynin saxiixa saxda ah ee badalka Philippe Coutinho, kooxda waxaa ka maqan doorka uu kaga ciyaari jiray laacibka reer Brazil”.
Si kastaba Philippe Coutinho ayaa ugu biiray kooxda Barcelona suuqa bishii January ee lasoo dhaafay aduun dhan 160 milyan euro, wuxuuna noqday lacibka labaad ee ugu qaalisan kubada cagta, kadib Neymr Jr oo ugu dhaqaaqay Paris Saint-Germain aduun dhan 222 milyan oo euro.
Eric Abidal oo ka hadlay mustaqbalka tababare Ernesto Valverde, muxuuse ka yiri Lionel Messi?